नायिका स्वस्तीमाको गजबको आइ, डिया, आफुले लगायका लुगा बेच्दै, आखिर किन ? -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
नायिका स्वस्तीमाको गजबको आइडिया, आफुले लगायका लुगा बेच्दै-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरुले पनि सामाजिक काम गर्न थालेका छन् । कोरोनाको जोखिमका कारण फुर्सदिला भएका कलाकारहरुले फरक काम गर्न थालेका हुन् । केही सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्दै आम्दानी बढाउने काममा लागेका छन् भने केही समाजिक काममा सकृय हुँदैछन् ।
फिल्म हल कहिले खुल्ने हो कुनै टुंगो समेत नभएका कारण कलाकारहरुको भविष्य पनि अन्यौलमा छ । त्यसैले फरक काम प्रति पनि कलाकारहरुको रुचि जाग्न थालेको हो । नायीका प्रियंका कार्की र उनका पति घरमै प्रोडक्सन हाउस संचालन गर्ने योजनामा छन् । उनीहरुले एउटा यु, ट्युव कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेका छन् ।
नायीका वर्षा राउत पनि पारिवारिक कामलाई नै यु, टु्युवमा सार्वजनिक गर्छिन । अन्य नायिकाहरुले पनि धेरै नयाँ काम थालेका छन् । त्यस्तै नायीका स्वस्तीमा खड्काले पनि कोरोना कहरमा अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न थालेकी छन् । नक्सालको हंकुक सारंग नाम गरेको कोरियन रेष्टुरेण्टमा स्वस्तीमाले यस्तै काम गरेकी हुन् ।
Prevगायक राजु परियारको कान्छो भाइ गीतबाट लाखौ डु, बेपछि ! यति मिठो स्वर छ (भिडियो सहित)
Nextजानिराखौं, कालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइ,दाहरु, यस्ता छन्